Soo Iibso Budada Awoodda Sare & Waxay Ilaalisaa Beerka Xoogga Saaraya 20: 1 Maral Root Rhaponticum Carthamoides - Rar Bilaash ah & Cashuur La'aan | WoopShop®
Budada Awoodda Sare & Waxay ilaalisaa Beerka urursanaanta 20: 1 Maral Root Rhaponticum Carthamoides
$ 99.99 qiimaha joogtada ah $ 110.99
Color 500g 1000g 100 g 200g
Budada Awoodda Sare & Waxay ilaalisaa Beerka Isku-uruurinta 20: 1 Maral Root Rhaponticum Carthamoides - 500g gadaal baa laga keenay oo markab sida ugu dhaqsaha badan ayuu u soo noqonayaa markuu kaydka ku soo noqdo
Waxyaabaha ay ka kooban tahay: Echinacea Soosaarida Budada
Tirada: 1 bac
Nambarka Tusaalaha: 31203
MARAL ROOT waxay xooga saartay 20: 1 soosaarid
Dufcaddii cusbaa 2021
Qiyaasta lagu taliyay: 1g. maalin kasta
"Maral Root wuxuu ku fiican yahay waxqabadka isboortiga, dhisida murqaha caatada ah, wuxuu ku fiican yahay culeyska miisaanka, wuxuu kordhiyaa dheef-shiid kiimikaad, ma laha waxyeellooyin, iyo wax intaa ka badan."
Maral Root waxaa sidoo kale loo yaqaanay 'Rhaponticum carthamoides' iyo 'leuzea' si fiican looma yaqaanno-laakiin sumcadda ayey ku sii kordheysaa oo waxay noqotay mid caan ah. Laakiin xididka Maral waxaa loo isticmaali jiray kumanaan sano Daawada Dhaqanka Shiinaha. Waxaana loo tixgeliyaa inuu yahay geedo yaryar oo awood badan oo nolosha sii fidiya iyada oo aan wax saameyn ah lahayn.
Adaptogen awood leh - Maral xididkiisu waa adaptogen weyn sida ashwagandha, Rhodiola rosea iyo wakiilo kale oo badan oo dhir dhireed leh. Kuwaas oo dhami waxay ka caawiyaan jidhka inuu la tacaalo culeyska jirka iyo maskaxda.
Waxay ka kooban tahay - xididka Maral wuxuu ka kooban yahay xeryo badan oo loo yaqaan 'adaptogenic xeryahooda iyo flavonoids, lignins, fitamiino, tannins, phytoecdysones, alkaloids, iyo asiidh dabiici ah.
Kordhinta Murqaha Caatada - Daraasadaha lagu sameeyay Ruushka waxay muujiyeen in xididka Maral uu yahay adaptogen awood leh oo jirka ka caawiya inuu soo saaro murqaha caatada ah. Sidaa darteed ciyaartooydu waxay sifiican uga jawaabaan jimicsiga maxaa yeelay xididka Maral waxaa kujira iskudhafyada loo yaqaan 'ecdysterone' kuwaas oo soosaara natiijooyin lamid ah steroids laakiin aan lahayn waxyeelo
Waxay hagaajineysaa Gadiidka O2 - xididka Maral wuxuu kaloo wanaajiyaa awooda haemoglobinkeena si aan u qaadno ogsijiin badan taas oo na siinaysa xoojin muhiim ah oo tamar ah.
Wuxuu ilaaliyaa Beerka - xididka Maral wuxuu kaloo caawiyaa inuu ka ilaaliyo beerka sunta taasoo ka caawineysa hagaajinta tamarta iyo firfircoonida.
Wanaagsan Caddaan Maskaxeed Ka Fiican - xididka Maral waa wakiil awood badan kaas oo sidoo kale ka caawiya hagaajinta awoodaha garashada wuxuuna abuuraa hufnaan maskaxeed iyo wacyi wanaagsan.
Waxay ka caawisaa dheef-shiid kiimikaadka - xididka Maral wuxuu kaloo ka caawiyaa jirka inuu metabolo baruurta sidaas awgeedna wuxuu ka caawiyaa miisaanka oo yaraada.
Kordhiyaa Nidaamka Difaaca - Xididka Maral wuxuu kaloo gacan ka geystaa sare u qaadista habka difaaca jirka iyo ka hortagga hargabka, hargabka, iyo infekshannada kale.
Waxay yareysaa Cadaadiska - Maanta iyo da 'kasta, wax kasta oo gacan ka geysan kara hoos u dhigida walbahaarka sida xididka Maral waa mid aad muhiim u ah.
Wuxuu Dhisaa Kelyaha Yin - Daawada Shiinaha, xididka Maral wuxuu caawiyaa dhisida kelyo badan sidaasna waxay ka caawisaa soo celinta jirka iyo ka soo kabashada diiqada.
Daawada Ayurvedic ee Hindiya - Daawada Ayurvedic Daawada xididka Maral waxay ka caawineysaa hoos u dhigista Vata, ka takhalusida pitta aad u badan, iyo Kapha dhexdhexaad ah.
Antimicrobial - Xididka Maral wuxuu dilaa noocyada qaar ee bakteeriyada iyo fungal cudurada.
Waxay ka caawisaa Dhiig yaraanta - Maral xididku waxay sare u qaadaan wax soo saarka unugyada dhiigga cas iyo cas.
Waxay U Shaqeysaa Werwer - Daraasado lala yeesho xayawaanka ayaa muujinaya in xididka Maral uu si weyn ugu shaqeeyo bogsashada walwalka.
Waxay hagaajinaysaa wareegga - xididka Maral wuxuu kaloo hagaajiyaa wareegga murqaha, maskaxda, iyo xitaa nudaha wadnaha.
Tamar badan - Xididka Maral wuxuu abuuraa glutamate decarboxylase oo lagu daro acetylcholine esterase maskaxda iyo jirka oo dhan si looga caawiyo soo saarida ATP badan tamar iyo firfircooni badan.
Soosaarka Insulin - Daraasadaha qaarkood waxay sidoo kale muujinayaan in xididka Maral uu sidoo kale wanaajin karo soosaarka insulin
Anti-bararka - xididka Maral wuxuu kaloo ka caawiyaa diidmada soosaarka Ka-hortaga Nuclearka Nukliyeerka kappa B oo qayb ka ah wareegga caabuqa. Sidaas awgeed caawinta in laga takhaluso bararka.
Waxay ka kooban tahay Antioxidants fara badan - xididka Maral waxa kale oo ku jira antioxidants awood badan oo ka caawiya kahortaga iyo bogsiinta dhaawaca DNA sidaasna looga hortago loona bogsado cudurada.
Tayo weyn, waad ku mahadsan tahay, waad ku qanacsan tahay iibsigayga
Dalbashada maalinta 9-5-21 imaatinka jasiiradaha Canary 23-6-21 waxay qaadatay waqti dheer in la yimaado, sifiican looga ilaaliyo nalka sidoo kale Xumbada Bag mahadsanid